Selling Webbing fisaka
Sliding Webbing malefaka
Andian-dahatsoratry ny fametahana marindrano
Wires Rope Accessaries
Ny turnbuckles karazana US sandoka dia ampiasaina hanamafisana ny ...
Rohy fidirana amin'ny rojo
Herinaratra hoist azo zaraina ho tariby tady electri ...
Clamp vy vy
Clamp vita amin'ny vy vy clamp Rail clamp: mainl ...
Antsamotady webbing fisaka
Fitaovana: polyester mahery (100% PES) fiarovana ...
Santionany maimaim-poana ho an'ny firaka vy manainga vy amin'ny roa L ...
T (8) tadin'ny roja tokana antsamotady Standard GB / T2 ...
Steel slab clamp billet lifting clamp Ny fitaovana tong amin'ny fitaterana bileta dia namboarina tamin'ny traikefa nandroso avy tany an-trano sy tany ivelany noho ny traikefa tamin'ny famokarana nandritra ny taona maro ka tsy nisy fanjifana herinaratra, tsy nisy fanelingelenana onja elektromagnetika, azo itokisana sy azo antoka amin'ny asany ary malefaka mampifanaraka. Ny zava-misy dia nanaporofo fa ity fitaovana manainga ity dia afaka manala sy mamoaka volafotsy vy tsy misy fiaraha-miasa amin'ireo mpiasa eny an-kianja, izay lifti ideal ...
Magnetsaka manangona maharitra
Mpanangana andriamby maharitra The Super Magnet Automatic Lifting Sucker dia vokatra teknolojia avo lenta miorina amin'ny fitaovana maherifo mahery. Ampiasaina be amin'ny fitaterana sy ny fampiakarana ny vy, ny milina, ny bobongolo, ny trano fanatobiana entana, sns ... Ny fifandraisana amin'ny bara sy vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny famatrarana sy ny famoahana ary ny fikirakirana ireo sanganasa. Famaritana modely Rated capacitive lifting Dimensions (mm) lanjan'ny kg ...
Trolley fitaterana entana
Cargo entana fitaterana trolley indostrialy Roller saribakoly miaraka amin'ny avo azo itokisana, mateza ary fiarovana fari-pitsipika. Ny dolly anoloana dia miaraka amina fanindriana tohana mihodina izay mamela ny familiana malalaka nefa tsy mila mijanona ary miverina mamerina ny toerany. Hisintona amin'ny tanana na apetaho amin'ny forklift amin'ny fitarihana azy. Manakodia entana mavesatra mora foana avy amin'ny teboka A mankany amin'ny teboka B miaraka amin'ny ezaka kely kokoa. Tsy hiala eo ambanin'ny enta-mavesatra ny rafitra dolly - na dia eo ambanin'ny fisintomana sy ny fitsorohana aza. Ny elanelana misy eo amin'ny saribakoly any aoriana dia ...
Tady tariby tariby miaraka amin'ny Socket Open Spelter
Nandrisika Us Type G416 Groove Open Type Spelter Socket
Fametahana takelaka vy
Antsipiriany momba ny vokatra: Fametahana takelaka fiakarana vy fanamafisam-peo avo lenta miendrika vy miakatra fanakanana modely miasa fatra mametra (Ton) fanokafana vava (mm.) Lanja tsirairay (kg.) LWK928-1 0.8 0-16 2.8 LWK928-2 1 0-22 3.6 LWK928-3 2 0-30 5.5 LWK928-4 3.2 0-40 10 LWK928-5 5 0-50 17 LWK928-6 8 0-60 26 LWK928-7 10 0-80 32 LWK928-8 12 25-90 48 LWK928- 9 16 60-125 80 Mitsivalana vy manainga takelaka C ...
Ampiasao amin'ny rojo rohy, mifandray amin'ny rojo ary misy antsamotady rojo.
Fampiharana: Ny antsamotady webbing fisaka fotsy dia be mpampiasa amin'ny seranam-piaramanidina, aerospace, fananganana angovo nokleary, fanamboarana miaramila, famoahana seranan-tsambo sy famoahana entana, fitaovana elektrika, fanodinana masinina, vy vy, fanamboarana sambo, fitaterana sy saha hafa.
Ny tombon-tsoa azo avy amin'ny clamp billet clamp dia azo antoka sy azo antoka ary azo antoka. Ny mekanika fanokafana sy fanidiana dia vita amin'ny vy vita amin'ny firaka misy hery matanjaka azo entina. Ny clamp billet clamp dia manana androm-piainana maharitra. Araka ny firafiny, ny slamp billet clamp dia mizara ho clamp raikitra sy clamp azo ovaina (ny haavon'ny H tsy azo ahitsy). Ny clamp billet dia mety amin'ny fampiakarana ny famaritana samihafa sy ny isan'ny billet.
Clamp tady tariby
Ity vokatra ity dia be mpampiasa amin'ny vy, fanodinana lasitra mekanika, trano fanatobiana entana ary ny fiakarana hafa.
Antsamotady tariby vy
Ny mampiavaka azy dia ny vatan'ny tady izay malefaka, misy teboka manainga maro, afaka mamaha ny fanontaniana amin'ny toerana kely voafetra sy ny fahafaha-mampidina avo.
Tady tariby vy
Fampiharana: Mety amin'ny mpanova, manamboatra sambo ary milina manokana ary tontolo iainana amin'ny fitakiana manokana manainga. Ny hery fanapahana farany ambany amin'ny tady tariby tsy misy mpiray dia 6 heny amin'ny enta-mavesatra miasa.
Antsamotady webbing malefaka
Adress: No 188, Longgang Road, Gaogang District, Taizhou City, 225300, Jiangsu, Sina